Ny atao hoe finoana (1, 2)
Olona nanam-pinoana (3-40)
Tsy afaka mampifaly an’Andriamanitra izay tsy manam-pinoana (6)
11 Ny finoana dia fatokisana tanteraka hoe hitranga ny zavatra antenaina,+ sady porofo* manamarina ny zavatra tena misy nefa tsy hita maso. 2 Fa noho ny finoana dia nasehon’Andriamanitra hoe nankasitrahany ny olona fahiny.* 3 Finoana no ahalalantsika hoe ny tenin’Andriamanitra no nandaminana an’izao tontolo izao,* ka avy amin’ny zavatra tsy hita maso no nampisy ny zavatra hita maso. 4 Finoana no nahatonga an’i Abela hanao sorona ho an’Andriamanitra, dia sorona nisy vidiny kokoa noho ny an’i Kaina.+ Noho ny finoany, dia nahazo porofo izy hoe olo-marina satria nankasitraka* ny fanomezana nataony Andriamanitra.+ Ary na efa maty aza izy, dia mbola miteny ihany+ noho ny finoany. 5 Finoana no nahatonga an’i Enoka+ hafindra toerana mba tsy hahita fahafatesana, ary tsy hita na taiza na taiza izy satria nafindran’Andriamanitra.+ Fa talohan’ny namindrana azy, dia nahazo porofo izy hoe nankasitrahan’Andriamanitra. 6 Ary izay tsy manam-pinoana dia tsy afaka mampifaly an’Andriamanitra. Fa izay manatona azy dia tsy maintsy mino hoe misy izy sady mpamaly soa an’izay mitady mafy azy.+ 7 Finoana no nahatonga an’i Noa+ hatahotra an’Andriamanitra sy hanamboatra sambofiara+ mba hamonjena ny ankohonany. Efa nampitandreman’Andriamanitra momba ny zavatra mbola tsy hitany+ izy talohan’izay. Finoana koa no nanamelohany an’izao tontolo izao,+ ka lasa mpandova ny fahamarinana izy satria nanam-pinoana. 8 Finoana no nahatonga an’i Abrahama+ hankatò rehefa nantsoina izy. Nankatò izy ka nankany amin’ny toerana homena azy ho lovany. Ary nandeha izy, na dia tsy fantany aza hoe ho aiza.+ 9 Finoana no nahatonga azy hivahiny tany amin’ilay tany nampanantenaina, ka hoatran’ny hoe tany an-tanin’olona+ izy. Nipetraka an-tranolay+ izy, niaraka tamin’i Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova aminy an’ilay fampanantenana.+ 10 Niandry foana an’ilay tanàna manana fototra tena izy mantsy izy, ary Andriamanitra no mpamorona sy mpanangana an’ilay izy.+ 11 Finoana koa no nahatonga an’i Saraha ho bevohoka,* na dia efa nihoatra ny taona ahafahana miteraka+ aza izy. Nieritreritra mantsy izy hoe tsy mivadika amin’ny teniny* Ilay nampanantena azy. 12 Noho izany, dia avy tamin’ny lehilahy anankiray, izay toy ny efa maty,+ no nahaterahan’ny olona+ be dia be hoatran’ny kintana eny amin’ny lanitra sady tsy voaisa hoatran’ny fasika eny amoron-dranomasina.+ 13 Nanam-pinoana mandra-pahafatiny izy rehetra ireny, na dia tsy hitany aza ny fahatanterahan’ny fampanantenana.+ Tazan’izy ireo lavitra+ kosa izany ka nandrasany mafy, ary nilaza tamin’ny olona izy ireo hoe vahiny sy mpivahiny teo amin’ilay tany. 14 Fa izay milaza an’izany dia manaporofo fa miezaka mafy mitady toerana honenany izy. 15 Raha nieritreritra foana ny toerana nialany+ anefa izy ireo, dia ho nahita hirika hiverenana. 16 Fa toerana tsara kokoa no iriny ho azo, dia ilay any an-danitra. Tsy mahamenatra an’Andriamanitra àry ny hantsoina hoe Andriamaniny,+ satria izy efa nanomana tanàna ho azy ireo.+ 17 Finoana no nahatonga an’i Abrahama ho hoatran’ny hoe efa nanao sorona an’i Isaka mihitsy, tamin’izy notsapaina.+—Vonona hanao sorona ny zanany lahitokana+ ilay lehilahy izay faly erỳ nahazo ny fampanantenana.—Vonona hanao an’izany izy, 18 na dia efa nilazana aza hoe: “Ho avy amin’i Isaka ilay hantsoina hoe taranakao.”+ 19 Fantany mantsy fa vitan’Andriamanitra na dia ny manangana an’i Isaka amin’ny maty aza. Ary naverina taminy indray io zanany io na dia toy ny hoe efa maty aza, ka lasa misy heviny an’ohatra izany.+ 20 Finoana koa no nahatonga an’i Isaka hitso-drano an’i Jakoba+ sy Esao+ momba ny zavatra mbola ho avy. 21 Finoana no nahatonga an’i Jakoba hitso-drano azy roa lahy zanak’i Josefa,+ tamin’i Jakoba efa ho faty,+ ary niankohoka* izy sady niankina tamin’ny tendron’ny tehiny.+ 22 Finoana no nahatonga an’i Josefa, tamin’izy efa ho faty, hiresaka hoe hafahana ny zanak’Israely, ka nanafatrafatra* momba ny taolambalony*+ izy. 23 Finoana no nahatonga ny ray aman-drenin’i Mosesy hanafina azy telo volana, taorian’ny nahaterahany.+ Hitan’izy ireo mantsy fa zaza mahafatifaty+ izy, ary tsy natahotra ny didin’ny mpanjaka+ izy ireo. 24 Finoana no nahatonga an’i Mosesy tsy hanaiky hatao hoe zanaky ny zanakavavin’i Farao,+ rehefa nihalehibe izy.+ 25 Naleony nampijalina niaraka tamin’ny vahoakan’Andriamanitra, toy izay hifaly vetivety tamin’ny fahotana. 26 Nihevitra mantsy izy hoe sarobidy noho ny harenan’i Ejipta ny latsa nozakain’ilay Voahosotra, satria niandry mafy ny hahazo an’ilay valisoa izy. 27 Finoana, fa tsy tahotra ny hatezeran’ny mpanjaka,+ no nahatonga azy hiala tao Ejipta,+ satria tsy azo nohozongozonina mihitsy izy, toy ny nahita an’Ilay tsy hita.+ 28 Finoana no nahatonga azy hankalaza ny Paska sy hanosotra ra teo amin’ny tolàm-baravarana, mba tsy hamely* ny lahimatoa+ teo amin’ny Israelita ny mpandringana. 29 Finoana no nahavitan’izy ireo niampita ny Ranomasina Mena, hoatran’ny hoe nandeha teo amin’ny tany maina.+ Natelin’ny+ rano kosa ny Ejipsianina rehefa nanandrana nandeha teo. 30 Finoana no nampianjera ny mandan’i Jeriko rehefa avy nohodidinina nandritra ny fito andro.+ 31 Finoana no nahatonga an’i Rahaba mpivaro-tena tsy ho faty niaraka tamin’ny olona tsy nankatò, satria noraisiny tsara+ ireo mpitsikilo. 32 Inona koa no holazaiko? Fa tsy ho ampy ny fotoana raha hotantaraiko daholo ny momba an’i Gideona,+ Baraka,+ Samsona,+ Jefta,+ Davida,+ Samoela,+ ary ny mpaminany hafa. 33 Nanam-pinoana izy ireo ka nandresy fanjakana,+ nampanjaka ny fahamarinana, nahazo fampanantenana,+ nanakombona ny vavan’ny liona,+ 34 namono afo niredareda,+ afaka nandositra lelan-tsabatra,+ nalemy nefa lasa nahery,+ lasa nahery tany an’ady,+ ary nampandositra miaramila nanafika.+ 35 Ny vehivavy sasany kosa nandray ny havany natsangana tamin’ny maty.+ Ny olona hafa indray nampijalijalina satria tsy nanaiky hafahana tamin’ny alalan’ny vidim-panavotana, amin’izay izy ireo hahazo fitsanganana tsara kokoa. 36 Ny hafa kosa notsapaina ka nesoina sy nokaravasina, ary tsy izany ihany fa nofatorana rojo vy+ sy nogadraina+ koa. 37 Notoraham-bato+ izy ireo, notsapaina, notsofana hizara roa, novonoina tamin’ny sabatra,+ nirenireny nitafy hoditr’ondry sy hoditr’osy,+ sady tsy nanana na inona na inona sy niaritra fahoriana+ ary nampijalina.+ 38 Ary tsy mendrika azy ireo izao tontolo izao. Nirenireny tany an-tany efitra izy ireo, teny an-tendrombohitra, tany anaty lava-bato,+ ary tany anaty lavaka any ambanin’ny tany. 39 Tsy nahita ny fahatanterahan’ilay fampanantenana anefa izy rehetra ireo, na dia nahazo porofo aza hoe nankasitrahana satria nanam-pinoana. 40 Andriamanitra mantsy efa nieritreritra ny hanome antsika zavatra tsara kokoa,+ mba tsy hatao lavorary izy ireo raha tsy eo isika.
^ Na: “porofo mazava.”
^ Na: “ny razambentsika.”
^ Na: “ny vanim-potoana.” Jereo F.T.
^ Na: “satria nanome porofo ka nanaiky.”
^ Na: “hahazo hery hananana taranaka.”
^ Na: “hoe azo itokisana.”
^ Na: “nivavaka.”
^ Na: “nanome toromarika.”
^ Na: “ny fandevenana azy.”
^ Abt: “tsy hikasika.”